Ndezvipi Zvakawanda zvekupikira paInca Trail
Nzira dzekutengesa, vatariri vemikova, vabiki nevamwe vashandi
Mazano haatauri mumutengo mukuru weInca Trail, asi vazhinji vanoenda kunongedza mazano avo, vatakuri vemasuwo, uye vanobika pamusi wepakutanga kana wokupedzisira wekukwira. Kuvhara hakusi kusungirwa, naizvozvo haufaniri kumbonzwa uchimanikidzirwa mazviri, asi iyo tsika pamugwagwa (nekuda kwekupa mazano akawanda, verenga A Guide yekupinza muPeru ).
Kuti ndikupe pfungwa yekuti mari yakawanda yaunofanira kutakura kuti uwane mazano - uye kuti iwe unofanira kupa zvakadini kune vakasiyana-siyana vatsigiri vevatsigiri - tinotarisa mazano anopiwa nevamwe vevatapi vedu veInca Trail vanofambisa .
Izvi zvinokurudzira ndezvokutanga 4 zuva / 3 usiku Inca Trail; mitengo yakanyorwa muPeruvia nuevos soles - muzvizhinji, zvakanakisisa kutaurirana nevashandi vachishanda pasi-denomination denue sol bills.
SAS Travel: inokurudzira kuti munhu mumwe nomumwe ari muboka anopa pakati pe50 ne60 nuevos soles (US $ 19 kusvika $ 23) kune "pot," iyo inowanzogoverwa pakati pemubiki, mubatsiri kubika, mukuru mubatsiri, nevatakuri. Uyewo, mamwe mapfumbamwe kubva kune makumi maviri kusvika kune makumi maviri ($ 5.80 kusvika $ 7.70) kubva kumunhu mumwe nomumwe muboka remubatsiri mutungamiri uye 18 kusvika ku 28 soles ($ 7 kusvika $ 10.80) yemutungamiri mukuru.
Sungate Tours: inokurudzira pakati pe 60 ne80 soles kubva kune rimwe boka; 80 kusvika ku100 soles mumwe nomumwe akabika kubva muboka; 160 kusvika kune mazana maviri kubva muboka revatungamiri.
Chaska Tours: inokurudzira kuti wega wega wega anofambe anofamba nemasendi makumi mashanu ega ega eboka duku (1 kusvika ku 5 trekkers) uye makumi matatu makumi matatu ega ega eboka guru (6 kusvika ku16 trekkers). Uyewo huwandu hwemazana makumi masere nemakumi matatu emutungamiri, makumi manomwe makumi mashanu ezvokubika uye imwe makumi mashanu emubatsiri wega wega wega (anopiwa pamwe chete kubva kune boka rekushanyira).
Llama Path: rinoratidza masuo makumi matanhatu emubati wega wega wega uye zana 120 kune mubiki (kubva muboka rose, kwete kubva kune mumwe nomumwe anofamba).
Uyezve mamwe mazano anokurudzira:
G Adventures: "Mutemo wakanaka wegumbo uripo kubva pa $ 6 kusvika ku $ 8 pazuva nokuda kwevatariri" (15 kusvika 20 nuevos soles).
Andean Travel Web (iyo yega webhusaiti, kwete sangano rekushanyira): Inokurudzira kutora imwe US ​​$ 25 kusvika kune $ 30 (65 kusvika 78 nuevos soles) nemunhu kuvhara mazano, pamwe nevatariri vemuzvimwe voga vakagadzikana zvakasiyana.
Nguva dzose yeuka kuti mazano haatenderwi. Zvisungo zviri pamusoro apa ndezvokufungidzira bedzi uye kufunga kuti basa rakapiwa raiva rehutano hwakanaka. Kana chikafu chako chakanga chakaipa, somuenzaniso, haufaniri kunzwa uchisungirwa kunongedzera mubiki.
Panguva imwe chete, dzivisa chido chekupfuudza. Kunyange kana Inca Trail yako yakave kubudirira zvakakwana uye vashandi vaive vakakurumbira, kudarika-kutengesa kunogona kutungamirira kumatambudziko mushure mekufamba. Chaska Tours inosanganisira zvinotevera mubvunzo waKe: "Ndapota musapfuudza-kana kuti [ivo vatakuri] vanowedzera kudhakwa kupemberera nekuregeredza mhuri dzavo." Havasi vose vanorindira vanomwa pfuma yavo, hongu, asi zvinoitika.
Kana iwe uchinzwa iwe ungada kuenda kunze kwemashoko akaenzana, cherechedza mupfungwa kuti vashandi vakawanda vanozoonga nezvezvipo zvekuwedzera zvakadai sekupfeka kana zvikoro zvekuchikoro zvevana vavo.
Nyaya Yechido yaLaura Bozzo
Music Concerts muPeru muna 2016
Peru Tourism Statistics
Nzira Yokufamba Nacho kubva kuLima kusvika kuCusco muPeru
Dzidza Kuenderera Mberi Nokusvika Kumusoro Wepamusoro Paunoshanyira Machu Picchu
GOGO Mazororo: Maitiro Avanoita neVafambi Vekufamba
Cruise America inzira huru yeRV
Nzira Yokushandisa Nayo Cable Clutter Paunofamba
Dzidza Kuda Kufara Gore Rinofara muChinese
Disneyland Kambani: RV Pagaka uye Campgrounds
Ita Yese Foni Yese Inodana kuSpain
Gypsy Las Vegas - YAKAVAKA
10 Zviratidzo Uri kubva kuTacoma
The 9 Best Warsaw Hotels of 2018
London Weather uye Zviitiko munaJune
Iholide Yokuzvipira Mikana muPhoenix
Le Vieux Logis Hotel iri muDordogne
8 yeZvakanaka Kunoshanyira Zvivakwa muGhana